Iingxowa zesikhumba ze-OEM, uMenzi weengxowa zoBhaka | Gaofeng
Ugxininiso lwefektri kwimveliso yemithwalo Kwiminyaka engama-20 ngothando kunye nobungcali.
Ubungcali kwimveliso yazo zonke iintlobo zemithwalo kunye neemveliso zesikhumba, ezikhethekileyo ekuboneleleni
iinkonzo OEM bhetyebhetye kubathengi.
Injongo yethu kukwanelisa abathengi bethu ngokuchaneka okuphezulu kunye nomgangatho othembekileyo wokuqinisekisa ukuba wonke umthengi unokuziva ekhululekile kwaye eqinisekile ngempahla yethu kwi-applications.Our iimveliso zifumana ngokubanzi izicelo zabo kwimarike ngenxa yeepropati ezintle. Baneempawu ezininzi eziqinisekisa ukuthandwa kunye nokusetyenziswa.
I-Backpack ihlala ilukhetho lokuqala lokuhamba umgama omde.
Le ngxowa yenziwe ngesikhumba esisukiweyo semifuno. Ukudaya kuyinto yemveli kwaye yendalo.
I-Duffle yayidla ngokuba yingxowa eqhelekileyo koomatiloshe.
Ibhegi yeCross Body lelona qabane libalaseleyo ngaphandle kwesitrato. Ayinkulu okanye incinci.
Ukuxoxa kwangaphambili ngemveliso
Nokuba kukho intlanganiso yangaphambi kwemveliso yangaphambili, kodwa ngaphambi kwenyathelo lenkqubo nganye, sisenengxoxo encinci, kubandakanywa nendlela yokuphumeza imveliso ngokufanelekileyo, indlela yokusika izinto eziphathekayo ziya kuba zigcina izinto eziphathekayo, zeziphi iingxaki esinokujamelana nazo ngexesha lemveliso. inkqubo, kufuneka sithathele ingqalelo yonke imiba. Intlanganiso yangaphambi kwemveliso igxile kuyo yonke inkqubo yemveliso, kwaye le ngxoxo incinci ijolise kwinkqubo yemveliso nganye, kwaye imiba abayixoxa ngayo iya kuchazwa ngakumbi.
Uyilo lwakho okanye isampulu okanye izimvo, Uphononongo lokweNzeka, misela isicwangciso sophuhliso;
Khetha imathiriyeli, umbala, kunye neendlela zokucwangcisa uphawu;
Ukwenza isampuli, i-5.1 Ukuthumela isampuli kumthengi ojonga i-5.2 isampuli yokuvavanya;
Qinisekisa ukuba ithempleyithi ingena kwinkqubo yokuvelisa. Ukuba awunelisekanga, buyela kwisinyathelo sesibini, Ukwenza isampuli yangaphambi kokuveliswa kunye nokuvavanya isampuli;
Imveliso, Uvavanyo lweemveliso ezigqityiweyo, ukuPakisha, ukuThumela.
Sintywiliselwe ngokupheleleyo kwihlabathi lemveliso yabathengi bethu. Kodwa asigcini nje ngokungena kwiimpawu ezithile zecandelo; sikwangena nzulu kwimibuzo efana nale: "Yintoni eyenza abathengi bethu babe nemincili?" "Singawuqala njani umnqweno wokuthenga wabathengi bokugqibela?" Le nto siya kuyenza nawe. Le yindlela esenza ngayo iprojekthi yakho ibe yiprojekthi yethu.
I-Gaofeng igxininise ekuvelisweni kweempahla ezahlukeneyo zesikhumba kunye neengxowa, kwaye idlulela kwimveliso yezinye iingubo ezikhethekileyo.I-Gaofeng isekelwe kwingcamango yokuba umgangatho yindlela yokuphila, i-vvhas ilawula ngokungqongqo imveliso.Ukususela kwangaphambili ukuya ekuhlolweni kwemveliso egqityiweyo. , sizabalazela ukuba ngabagqwesileyo.
Siziingcali ekuboneleleni ngeenkonzo ze-OEM eziguquguqukayo kubathengi bethu, ngaphezulu kwama-2,000 eemitha zesikweri seendibano zocweyo, Yonke imithungo iguqule ukucinga kwethu malunga nomsebenzi kunye nenjongo yobuhle.